एमालेलाई राष्ट्रकविको आशीर्वाद महानायकको साथ
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का काठमाडौँ महानगरपालिका वडा २६ का उम्मेदवार देवेन्द्र रिमाललाई नेपाली चलचित्र जगतका महानायक राजेश हमालको साथ र महाकवि माधव घिमिरेको आशीर्वाद रहेको छ । २६ नम्बर वडाको मतदाता रहनुभएका महानयक हमाल गत शनिवार एमालेका उम्मेदवार रिमालको घरदैलो कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । हमालले आफ्नो वडामा भएको घरदैलो कार्यक्रममा एमाले उम्मेदवारलाई साथ
बिजय नजिक एमालेका महिला उम्मेदवार
काठमाडौ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका महिला नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले प्रचारप्रसारको कामलाई तीव्र पार्नुभएको छ । पहिलो चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट १३ जना महिलालाई प्रमुखका रुपमा एमालले अघि सारेको छ । ती मध्ये चार नगरपालिकामा प्रमुख र नौ गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार छन् । चितवनको
काग्रेससँग जवाफ छ ?
डा . गोविन्द वहादुर थापा काठमाडौं । नेपाल क्रमिक रुपमा बैदेशिक ब्यापार र त्यसमा पनि बिशेषगरी आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको रुपमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ । भएका उद्योगहरुलाई आयातले विस्थापित गर्दै लगेको छ भने अर्कोतिर व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता अझ डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ । विगत १० बर्षको स्थितिलाई मात्र हेर्यौं
मुटुरोगीलाई राजकुमारले दिए ५६ हजार
चिसाङ शेर्पा काठमाडौ । “मुटुको भल्ब ड्यामेज, शोभाद्वारा सहयोगको अपिल” समाचार गत चैत्र ३१ मा विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भयो । एकाएक शोभाका आफन्त तथा जाने बुझेकाले फेसबुकमार्फत शेयर गर्दै गए । अधिकांशले सहयोगको लागि अपिल गरे , सञ्चार माध्यममा शोभाको समाचार भाईरल बनेपछि देश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्ने आशा गरिरहंदा एकै व्यतिmले विरामीको अपरेशनका
भारतीय जनता पार्टी र माओवाद सीआइए मिसनका एक पार्ट
अर्जुन ज्ञवाली काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी, प्रचण्ड, बाबुराम र दरवारीया पश्चिमा विपरित जस्तो देखिएपनि नेपाललाई (क्रिश्चियन) सिआइएको स्वार्थ रक्षार्थ एउटै केन्द्रमा छन् । यसकारण सन् २००२ मा प्रचण्ड र बाबुराम विजेपी प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयलाई निवेदन हाले जुन कुराको खुलासा प्राध्यापक एस.डि मुनीले गरिसकेका छन् । धेरैलाई भ्रम छ भाजपा हिन्दु धर्मको रक्षार्थ खडा
दुर्ज पाल्न सास्ती
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलबाट अवकाश भएका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले अवकाशपछि पनि बहालवाला आइजीझैँ मातहतका गणपतिहरूलाई अनेकन बहानामा दुःख दिनेमात्रै होइन भारत भ्रमण गरेको खर्चसमेत व्यहोर्न लगाएपछि पीडितहरूले मुख्यालयसमक्ष यस कुराको जानकारी गराएका छन् । अवकाशपछि भोजपुरमा गई हलो जोतेको फोटो हालेर चर्चामा आउन जानेका राईले बदरी–केदार–द्वारिकाको धार्मिक भ्रमण गरेको खर्च समेत आफूले नगरी डिएसपीलाई
‘राजनीति मार्फत विकासको सपना’
जयराम थापा शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित नाम हो, जसले धेरै विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिएर, इन्जिनियर, पाइलट, चार्टर एकाउन्टेन र प्राध्यापक बनाएका छन् । उनीहरुको विज्ञताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको छ । तर, उनको परिचय यतिमा मात्र सीमित छैन कानूनी र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै क्रियाशील छन् । सबै क्षेत्रबाट उनले राष्ट्र र समाजलाई योगदान
गोरु व्यापारमा ‘लाइन म्यान’
काठमाडौं । नेपालको संविधानमा ‘मासु प्रयोजनको लागि’ गाई–गोरुको खरिद–बिक्री प्रतिवन्धित छ । कृषि प्रयोजनमा भने यसको खरिद–बिक्री अनिवार्य हो । मासु प्रयोजनको लागि जे–जति गाई–गोरुको खरिद–बिक्री भैरहेको छ, आवरणमा कृषि प्रयोजनकै लागि भनेर भैरहेको छ । र, यसवाट गाईगोरु व्यापारमा संलग्नहरू त मालामाल भएका छन् नै, प्रहरी प्रशासन पनि मालामाल भैरहेको छ ।
यी हुन् हतियार तस्करीका डन
काठमाडौ । खुल्ला सिमाना र कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपाललाई ट्रान्जिट वनाएर लागुऔषध, सुनतस्करी र अवैध हतियारको कारोवारलाई तिव्रता दिइएको पाईएको छ । राजनैतिक अस्थिरता बढी रहेको मौकापारी तराईका सिमावर्ती क्षेत्रदेखि पहाडसम्म हतियार र गोलीगट्ठाको ओसार पसार बढेको छ । के उदेश्य र केका लागि हतियारको अवैध कारोवारमा वृद्धि भएकोे हो भन्ने
कर्मचारी संगठनमा ओली–नेपाल छाँया
नेपालगञ्जमा त भद्रगोल नै भएछ !